Khtù Khronos mepụtara nduzi maka Vulkan | Site na Linux
Isaac | | GNU / Linux, Mmemme, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
El Otu ìgwè Khronos na-agba mbọ dị ukwuu iji zụlite, kwalite ma hazie API mepere emepe maka eserese (OpenGL, Vulkan), maka mmemme mmemme (OpenCL), maka ezigbo eziokwu (OpenXR) na ọtụtụ ndị ọzọ (WebGL, OpenVG, OpenVX, ...). Ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ dabere na ha. Ugbu a, ha emeela ihe ọzọ iji kwalite Vulkan graphical API ma mee ka ọtụtụ ndị ọrụ na ndị mmepe kwadoro ya.
Ihe ha mere ugbua bu ihe okike ihe nduzi iji bido na Vulkan. Mgbalị dị ukwuu site n'aka ndị otu Khronos Group iji nye gị mmalite kachasị mma ịmalite ịrụ ọrụ na API a. Ọgụgụ ọkụ, nke ihe niile kachasị mkpa etinyela na ihe na-adịghị atọ ụtọ. Otu a, ha ga - ejikọ gị na ọtụtụ ihe mmepe na Vulkan.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nrụpụta ma nwee mmasị n'ịgụ ntuziaka a, ị nwere ike budata ya na otu uzo a nke Peeji GitHub Site na oru ngo a. N’iburu n’uche na ụwa egwu egwu na-enweta nkwado karịa iji mepụta egwuregwu vidiyo maka Linux na mbata nke Google Stadia, ọ bụ ezigbo usoro ịme ihe iji gbalịa ịdọta ndị mmepe ọzọ ma kwado ụzọ mgbe ha chọrọ ịmepụta aha ọhụrụ.
Na site n'ụzọ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe dị ukwuu na ikpe ahụ, mana ebe ọ bụ na ekwuru m GitHub n'elu ikpo okwu, ịsị na e nwere ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya na weebụsaịtị a ebe a na-akwado ma na-achịkwa nnukwu akụkụ nke ọrụ mmeghe. Ntughari ha na-ekwu na ụfọdụ 40 nde njirimara akaụntụ nke ahụ abụghị Spam. Agbanyeghị, ọ bụghị ha niile bụ ndị mmepe, enwere ọtụtụ akaụntụ na-anaghị enye aka ma ọ bụ na-emepe emepe. Ma site na atụmatụ ụfọdụ, ha na-ekwu na enwere ihe dịka 5.000.000 ndị na-arụ ọrụ oge niile na ihe dịka nde 7 oge na-arụ ọrụ, yana ọtụtụ ndị na-adịghị akwụ ụgwọ, na ngụkọta nke ndị mmepe mmepe 24.2. Ọnụọgụgụ ahụ ebilila 1M kemgbe afọ 2018 a na-atụ anya iru 27.7M na 2023. Ana m ekwu maka ya n'ihi na ha bụ ọnụ ọgụgụ na-awụ akpata oyi n'ahụ banyere etu obodo si buo ibu, na ọ bụ naanị na GitHub ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Otu Khronos mepụtara ntuziaka maka Vulkan
Bill Gates maara ka esi agwa njakịrị dị ezigbo mma ... ị kweghị ya?
Differentzọ abụọ dị iche iche iji wụnye Google Chrome na Fedora 31